SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 36aad safarkii badmaaxii Sindibaad iyo jaziiradii dheymanka aheyd. – Filimside.net
Taariikhda: January 22, 2019
Sheekada waxay qeybtii hore noo mareysay markii aan ogaaday in masaska maalinkii aysan soo bixin oo ka cabsadaan haadka balse ay habeenkii soo baxaan.
Xiliga waa gabal dhicii meel cidlo an oo dad iyo duunyo midna lagu sheegin baan dhex marayaa mana heysto meel aan ku hoydo masaskina waxay qarka u saaranyihiin iney soo baxaan talo ayaana igu cadaatay.
Sidii aan u socday ayaan waxaan la kulmay albaab ciriiri ah markaas ayaan dhex galay wuxuuna iila ekaa qol yar oo ciriiri ah markaas ayaan waxaan soo qaatay dhagax weyn anigoo albaabkii yaraa iska saaray si uusan dugaag iigu soo galin waxaana is dhahay alx meel aamin ah oo aad caawo seexato ayaad heshay caawo inta iska hoyo oo hadii waagu baryo isaga tag.
Cabaar markii aan qolkii yaraa ku dhex jiray ayaan hareeraha fiiriyay mise waaba mas weyn oo qolka iigu dhex jiro misna hurdeyso markaas ayuu jirkeyga gariiray cabsi darted waxaana yaqiinsaday inaan halaagsamay oo ii dhamaatay isla markaasna maska caawo casho u noqon doono.
Waxaan isku nabay daribigii anigoo meeshii fadhiya waxaana habeenkii oo dhan ahaa mid soo jeeda cabsina la gariiraya, banaanaka ma aadi kartid oo waa halistii aduunka gudahana waa tanoo mas ii dhex jiifo wixii aan darbigii ku nabdaado ugu dambeyn waagii ayaa baryay markiise waagii uu baryay ayaan albaabkii dhagaxa ka leexiyay godkiina orod uga soo baxay iyadoon uu maskii weynaa I dareemin.
Waxaan u ekaa sidii qof sakhraansan waayo waxaa isugu key darsamay daal gaajo iyo hurdo la’aan waxaana sii watay socodkeygii anigoo togii kusii socday.
Anigoo sidaas ah ayaan waxaan halmar maqlay jug hadii aan fiiriyay mise waaba lax dhimatay oo buurta kazoo dhacday qofna ma aanan arkin waana la yaabay arkinkaas waxaana igu soo dhacday sheeko aan maqli jiray waagii aan yaraa taasoo aheyd in toga dheymanka ah ee masaska ka buuxaan uusan jirin qof dhex mari karto dadkana ay naftooda u cabsanayaan hase yeeshee waxay sameyn jireen xeelad ah in neef ari ah qalaan kadibna maqaar siibaan kadibna ay buurta kazoo tuuraan si ay ugu soo dhacdo toga dheymanka ah.
Markii ay dhulka jaw kusoo dhahdo ayay dhagaxaanta dheymanka ah jirkeeda galgalayaan kuna dhagayaan kadibna waxaa imaanayaan shimbara haadka ah sida Galleyrka iwm iyagoo dhilibkii dheymanka ku dhaganaa lugahooda kusoo qaata oo buurta la kora markaas ayay dadka imaanayaan oo ka bursanayaan shimbarta iyagoo hilibka kala baxayo dheymanka.
Kadibna dhagaxaanta dheymanka ah ayaa waxay u qaadanayaan dhulkooda iyagoo laga siisto qiimo aad u qaali ah.
Markii aan laxdii dhimatay misna maqaarka siibneyd arkay ayaan waxaan soo xusuustay sheekadaas markaas ayaan waxaan kor imid laxdii dhimatay anigoo bilaabay inaan dhagaxaantii dheymanka aheyd jeebabka iyo meelkasta ka buuxsado markaas ayaan laxdii dhimatay ag fariistay.
Waxyar kadib waxaa meesha yimid haad aad u weyn markaas ayuu laxdii kusoo kor dagtay anigana markuu soo dagtay ayaan is biimeeyay si aan togaan halista ah uga baxo waxaana ku dhagay lugtii haadka asigoo bilaabay inuu nala duulo aniga iyo laxdii dhimatayba ilaa uu naga geeyo buurta xigtay korkeeda.
Markii uu meeshii nagu dajiyay ayaan maqlay qeylo aad u xoogan iyo qof wata ood aad u weyn kaasoo dhinaca haadka usoo cararay balse haadkii ayaa duulay oo cabsi gashay, markii haadkii duulay ayuu ninkii haadka buriyay I arkay.
Ilama uusan hadlin lkn wuxuu dareemay asigana argagax iyo cabsi wuxuuna aaday dhankii laxdii la maqaar siibay wuxuuna bilaabay inuu laxdii gad gadiyo asigoo dheymankii ka raadinaayay balse wuu ka waayay wax dheyman ah.
Markii uu laxdii dheymanka ka waayay ayuu bilaabay inuu qeyliyo asigoo leh; alla hoogay oo ba’ay waan khasaaray wuxuuna bilaabay inuu cabaado.
Markaas ayaan u dhawaaday inta isoo fiiriyay ayuu igu dhahay kumaad aheyd? Halkana maxaad kazoo doontay?
Waxaan ugu jawaabay; waxba ha cabsan aniga banii aadam adigoo kale ayaan ahay waxaana halkaan ikeenay duruuf iyo waayo waxaana ahaa nin badmaax ganacsade ah sababta aan halkaan u imidna sheeko dheer ayaa ka dambeyso ee adiga ha cabsan dheymankana haka walwalin waayo aniga ayaa wado dheyman badan waxaana kaa siini in kugu filan.
Markii aan sidaas dhahay ayay ninkii cabsidii ka tagtay asigoo farxay wuxuuna bilaabay inuu ii mahadceliyo wuxuuna ii geeyay koox kale oo ganacsato iyagana meesha u yimid iney dheymanka wax ka dabtaan waana is baranay anigoo qisadii I qabsatay uga sheekeeyay iyo sababta aan halkaan ku imid.
Nimakii ganacsatada waxay ii sheegeen in uusan jirin banii aadam gaaray togas dheymanka ah oo misna badbaaday aniga kahor markaas ayay ii hambalyeeyeen anigana waxaan iyagii qeyb ka siiyay dheymankii aan watay iyagoo ii mahad celiyay.
Kadibna waxaan bilownay socod ilaa aan ka imaanay dhul beereed aad u qurux badan kaasoo ku dhex yaalay jasiirad weyn halkii ayaana bilownay inaan ku nasano oo maalmo joognay kadibna waxaan uga soo gudbay magaaladii ay ganacsatada joogtay waxaana qaar kamid ah dheymankii aan watay uga badashay badeeco aad u fara badan anigoo usoo safray dhulkeygii iyo magaaladeydii baqdaad ilaa aan anoo nabad qabo ka imid.
Markii aan kusoo laabtay magaaladeydii ayay dadkii ii yimaadeen ayagoo raxan raxan ah waxaana ahaa mid uga sheekeeyo wixii aan lasoo kulmay waliba anoo tusay dheymankii aan soo helay aad ayayna u tacajubeen iyagoo dadka qaar bilaabeen in magaalooyinka fog fog iiga soo safraan si ay qisadeyda u maqlaan iyo layaabka ay leedahay.
Kadib Sindibaadkii badmaaxa ahaa ayaa kii xamaaligii ku yiri safarkii labaad ilaahay ayaa sidaas igu badbaadiyay insha’allah bari hadii la gaaro waxaan kaaga sheekeyn doonaa safarkeygii sadaxaad iyo sheydaankii madoobaa.
SAFARKII SADAXAAD EE SINDIBAAD IYO SHEYDAANKII MADOOBAA.
La soco qeybta 37aad.
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 27-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 28-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 29-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 30-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 31-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 32-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 33-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 34-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 35-aad Fadlan RIIX HALKAAN
waa sheeko cajiib ah
Maxaa dhacay caawa aaaway sheekadan
Idinkoo mahadsan shekada xiriir ka dhiga hada 2 haben maydan soo gelin